Banijya News | » कृषि विकास बैंकको साधारणसभा आज , के–के छन् मुख्य एजेण्डा ? कृषि विकास बैंकको साधारणसभा आज , के–के छन् मुख्य एजेण्डा ? – Banijya News
कृषि विकास बैंकको साधारणसभा आज , के–के छन् मुख्य एजेण्डा ?
पुस २७ , काठमाडौं ।
कृषि विकास बैंकको बार्षिक साधारणसभा आज बैंकको केन्द्रिय तालिम प्रतिष्ठान भक्तपुरमा ११ बजे बाट सुरु भएको छ । आर्थिक बर्षको मु–नाफा बाट ६ प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित २४ प्रतिहत लांभास वितरण गर्ने लागेको हो ।
सभामा अग्राधिकार सेयरधनीलाई पनि ६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिने एजेन्डा पनि छ । सभा प्रयोजनका लागि बैंकले पुस १३ गतेदेखि २७ आजसम्म बुक क्लोज गरेको छ । पुस १० गतेसम्म सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश पाउनेछन् ।
बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । बोनस वितरणपछि चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यसले ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।